FILAN-KEVITRY NY MINISITRA : Tsy mba voaresaka ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka
Ataon’ny fitondram-panjakana an-kilabao tanteraka ny fahasahiranana sy ny fahoriana mianjady amin’ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Tsy misy ny vahaolana misongadina sy maharitra eo anatrehan’ny fahantrana mianjady amin’ny vahoaka. 5 décembre 2017
Ny mahamaika ny mpitondra dia hanolo ireo tompon’andraiki-panjakana ambony hatrany mba hahazoan’olom-bitsy tombotsoa manokana. Tonga izao ny fety dia hirongatra izay tsy izy indray ny tsy fandriam-pahalemana, manginy fotsiny ny vidin-tsakafo efa mila tsy ho taka-bidy intsony kanefa toa tazanim-potsiny izany. Ny sabotsy lasa teo, nisy ny filan-kevitry ny minisitra tsy ara-potoana izay notanterahina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha. Tsy mba voaresaka tao anatin’izany akory ny fahasahiranana lalina mianjady amin’ny vahoaka. Tafiditra ao anatin’izany ny fidangan’ny vidim-piainana, tsy mba nasian’ny mpitondra resaka akory ny fikaroham-bahaolana mahakasika izany.
Eo ihany koa ny firongatry ny tsy fandriampahalemana izay efa tsy nety voafehy hatramin’izany. Ireto farany anefa dia maharary mafy ny vahoaka ankehitriny kanefa tsy hita mazava izay mba fandraisan’andraikitry ny mpitondra. Ny tena nisongadina nandritra an’io filan-kevitry ny governemanta tsy ara-potoana io dia ny fivahinianan’ireo tompon’ andraiki-panjakana any ivelany sy ny fitohizan’ny fanoloana ireo mpiasam-panjakana ambony eny anivon’ny minisitera na dia vao tamin’ny vola oktobra lasa teo aza no nisy fanovana sy fanendrena mpikambana ao anatin’ny governemanta.
Minisitera fito indray no fantatra fa voakasika tao anatin’io fanendrena mpiasam-panjakana ambony io. Amin’ny ankapobeny anefa, vahaolana ho an’ny fahasahiranam-bahoaka no tokony himasoan’ny mpitondra indrindra fa amin’izao fotoana ankatoky ny fety izao, hatreto aloha dia toa tsy nisy afatsy ny fampanantenana poakaty no mirarakopana.